Qalabka baaritaanka SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody-SARS-CoV-2 Products Products-Sinocare
SARS-CoV-2 IgM / IgG Qalabka Baaritaanka Antibody
(Habka Dahabka Kolloidhka)
Qalabka baaritaanka SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody waxaa loogu talagalay tayada ogaanshaha SARS-CoV-2 IgM / IgG antibody oo ku jirta dhiigga aadanaha, plasma ama muunad dhiig oo dhan.
Fayraska cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' wuxuu ka tirsan yahay genus-ka. COVID-19 waa cudur daran oo faafa oo ku dhaca neef mareenka. Dadku guud ahaan waa u nugul yihiin. Xilligan, bukaannada uu ku dhacay cudurka 'coronavirus' cusub ayaa ah isha ugu weyn ee laga helo infekshanka; dadka qaba cudurka asymptomatic sidoo kale waxay noqon karaan ilo faafa. Iyada oo ku saleysan baaritaanka cudurrada faafa ee hadda jira, muddada cudurku waa 1 illaa 14 maalmood, badiyaa 3 ilaa 7 maalmood. Astaamaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qandho, daal iyo qufac qallalan. Ciriiriga sanka, sanka oo dareera, cunaha oo xanuuna, myalgia iyo shuban ayaa lagu arkaa xaalado dhowr ah.
l Ogaanshaha degdega ah 15-20 daqiiqo gudahood
l Ogaanshaha tayada ee IgM / IgG unugyada difaaca jirka
l Hawlgal fudud oo aan qalab lahayn
l Natiijada muuqaalka iyo fasiraadda fudud
Tijaabinta fayraska (+)
Tijaabinta fayraska (-)
Bukaanku wuxuu ku jiraa mudada daaqada ee baaritaanka cusub ee coronavirus serological, antibodies-yada gaarka ah ee habka difaaca jirka weli lama soo saarin.
Bukaanku wuxuu u badan yahay inuusan waligiis qaadin infekshanka COVID-19.
Bukaanku hadda wuxuu ku jiraa heerarka hore ee cudurka cusub ee coronavirus infection.
Waxaa jira ixtimaal weyn oo ah infekshinka cusub ee coronavirus uu ku jiro marxalad ba'an. Waqtigaan, saxnaanta natiijooyinka baaritaanka nucleic acid waxay u baahan tahay in la tixgeliyo, waana lagama maarmaan in la xaqiijiyo in bukaanku leeyahay noocyo kale oo cudurro ah. Kiisaska wanaagsan ee daciifka ah ama daciifka ah ee IgM ee bukaanada ay sababaan cudurka 'rheumatoid factor' ayaa la helay.
Bukaanku waxay ku jiri karaan heerarka dhexe ama sare ee cudurka cusub ee coronavirus ama infekshan soo noqnoqday.
Bukaanleyda waxaa laga yaabaa inay qabaan infekshan hore laakiin horay ayey u bogsadeen ama fayraska ayaa laga nadiifiyay jirka. IgG-ga ay soo saartay jawaab celinta difaaca jirka waa la hayaa waqti dheer waxaana lagu ogaan karaa sambalka dhiigga.
Bukaanku wuxuu kujiraa wajiga firfircoon ee infekshinka fayraska, laakiin jirka bini'aadamka wuxuu u sameeyay difaac difaac coronavirus-ka cusub.
Bukaanku dhowaan wuxuu ku dhacay cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus', jidhkuna wuxuu hadda ku jiraa marxaladda soo kabashada, laakiin fayraska ayaa laga saaray jirka isla markaana IgM antibody-ka lama hoos ugu dhigin xadka ogaanshaha; ama baaritaanka nucleic acid wuxuu yeelan karaa natiijo taban oo been abuur ah bukaankuna wuxuu dhab ahaan kujiraa wajiga infekshanka firfircoon.